Global Voices teny Malagasy » Ouzbékistan: Manohana an’i Umida Akhmedova ireo bilaogera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Aogositra 2018 3:50 GMT 1	 · Mpanoratra Kathy Pidginson Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Liva Andriamanantena
Sokajy: Ozbekistan, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Ny Global Voices dia efa namoaka lahatsoratra momba ilay mpaka sary Ozbeka Umida Akhmedova  izay voampanga ho “nanompa sy ny nanaratsy ny vahoaka sy ny fomba amam-panao Ozbeka.” Niteraka fahatezerana teo amin'ny mpanao gazety vahiny, mpaka sary sy ny mpisera miteny Rosiana ity fiampangana ity.
Tamin'ny fotoana nanoratana dia efa maherin'ny 600 ny olona avy amin'ny firenena maro no nanao sonia ny fanangonan-tsonia  mitondra ny anarana hoe “Hetsi-panoherana sy hatezerana”, izay notarihin'ny Fiombonan'ny Mpanao Gazety Iraisampirenena Caucasia. Nisy ihany koa ny adihevitra mafana teo amin'ny bilaogera miteny Rosiana.
Nanoratra  i Ivanivanch :
Bilaogera marobe no nanameloka ny fitsarana didy jadona nataon'ny sampandraharaham-panjakana. Niteny nivantambatana  i Kinobomj :
Ho setrin'izany dia nanoratra  i vikarasik :
Mihevitra ilay bilaogera mulioshka  fa mety ho mifandraika amin'ny raharahan'ny foko vitsy an'isa ao Ozbekistan izay lohahevitra hodian'ny manampahefana hatrany tsy resahina ny olana mahazo an'i Umida. Hoy izy nanoratra  :
Betsaka ny mpanara-maso no mihevitra fa noho ny fanoloran-tenany tamin'ny zo maha-olompirenena no antony hanenjehana ara-pitsarana ilay mpaka sary Umida Akhmedova. Nanoratra  i Albatrossdoc fa navitrika loatra ho an'i Ozbekistan, tamin'ny famokarana sarimihetsika sy sary ary tamin'ny fandefasana sarimihetsika maneho ny endrika ara-piarahamonina tao amin'ny mozea i Umida Akhmedova sy ny vadiny Oleg Karpov (talen'ny Mozean'ny Sarimihetsika ao Tashkent ).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/03/124053/
 lahatsoratra momba ilay mpaka sary Ozbeka Umida Akhmedova: https://fr.globalvoicesonline.org/2009/12/25/25785/
 Niteny nivantambatana: http://kinobomj.livejournal.com/16243.html
 tena anton'ny hanenjehana ilay mpaka sary : http://dadakinder.livejournal.com/1150534.html